Ezohwebo ngesikhathi sokhuvethe - Bayede News
Owezi-2021: Akwaziwa uyozala nkomoni unyaka ozayo
Njengemvula efika kungazelele muntu, unyaka wezi-2020 utheleke nesigemegeme esikhulukazi sokhuvethe. Ukhuvethe lolu lunise okwemvula maqede kwamnyama amehlo umhlaba wonke, kwadideka abaholi, kwashayisana amakhanda nababholofidi. Lesi simo esibe mazonzo emhlabeni wonke, sigqeme elaseNingizimu Afrika ingozi engeqiwa ntwala kwezomnotho. Izigidi ezingaphezu kwezintathu nenxenye zabantu bakuleli zilahlekelwe yimisebenzi, maqede ikati lalala eziko. Ngenxa yalesi simo, izimboni eziningi ziye zavalwa. Abaningi balahlekelwa imiphefumulo yabo, kuyimanje isililo sesiphenduke isaga nehubo kwabaningi. Sisodwa isikhalo nesicelo, okuwumthandazo wabaningi othi, Somandla awuphele lo nyaka, ngethemba lokuthi owezi-2021 mhlawumbe uyoza nokungcono. Yize abaqaguli balolu khuvethe bengabonisi ukunikeza izizwe zomhlaba ithemba ngozayo unyaka, nokho isisho sakobantu sithi ithemba alibulali.
Ngaphandle kokulahleka kwemiphefumulo okumanje ilinganiselwa ngaphezu kwezinkulungwane ezingamashumi amabili, okube kubi kakhulu ukulahlekelwa kwabantu yimisebenzi. Lokhu-ke sekwakhe isimo esikhulu sendlala ezweni, okuyimanje lesi simo sisabhebhethekisa okomlilo wequbula. Sibhala namuhla nje, sesizwile ukuthi ukhuvethe lolu selushaya ibuya. Impela kuyosinda ezakwaluvadlwana. Le ndlala edalekayo, ukulahleka kwemisebenzi, nokutheneka amandla kwabantu kusazothatha eside isikhathi ukwelapheka, kwazise ngaphandle kokhuvethe ndini lolu, leli lizwe belisalokhu libhekene nesinzonzo isimo emnothweni walo.
UHulumeni uzame ukuza nekhambi eliyisibonelelo kwezomnotho nenhlalakahle kuzozonke izinhlaka zemiphakathi. Kuyilapha okuthe uMengameli wakuleli wamemezela isamba semali eyizigidigidi ezingama-R500, le mali ebihambisana nokutakula izimboni ezizikayo, ukunxephezela nalezo ezilahlekelwe yimikhiqizo kanye nokuletha izibonelelo kwabakade besebenza nalaba abadla imbuya ngothi.
Konke lokhu kuyimizamo nje esisize okwesikhashana.
Kuzokhumbuleka ukuthi umnotho waseNingizimu Afrika wakheleke phezu kwezimboni ezithile. Phakathi kwalezi, singabala ezezimbiwa, ezezimali nemishwalense, ezokuthengisa, ezolimo, njalo njalo.
Kwezithintekile kakhulu kulolu khuvethe yilezi ezilandelayo.
Ezokuvakasha, kuzokhumbuleka ukuthi le mboni yiyona elethela leli izindondla zezimali ezifana namadola njengoba kwaziwa ukuthi leli lizwe lithandwa kakhulu abavakashi abasuke bevela kwamanye amazwe. Nxa uyibuka ngehlo lenxanxathela yezinto ezithinta le mboni, kusuka emabhanoyini, izikhumulo zawo lapho kuqashwe izinkulungwane zabantu, amahhotela nazo zonke izindawo zokuhlala nokudla okudliwa kulezi zindawo, imishwalense ekhokhelwa izisebenzi, nokuningi ungasho ubone ukuthi ukuxhantela kwale mboni kukhulu kuleli futhi ukuguqa kwayo kunomthelela omkhulu ezweni jikelele. Okumele kucace futhi ngale mboni yikuthi asikhulumi ngabavakashi abasuke bezele ukuzobuka ubuhle bemvelo yaleli, okuyizintaba nezilwane, kepha sikhuluma ngabantu abasuke beza kuleli ngoba bezocosha amathuba abasuke bewabonile kwezomnotho ngaphakathi nasemazweni angomakhelwane.
Kubukeka sikhula kakhulu kunakuqala isibalo sabangasebenzi
Enye yezimboni ethinteke kakhulu kube yileyo yezezimbiwa kwazise yiyona ewumgogodla wakuleli selokhu kwathi nhlo. Izimboni ezincane nazo ziye zaguqa, ikakhulukazi lezo ezisebenza noHulumeni ukusiza iminyango ngokwehlukahlukana kwayo, kwazise uHulumeni naye kuyekwamele azifake isamfonyo ukuze akwazi ukumelena nokhuvethe nokwakha izibhedlela obekwaziwa ukuthi zizomumatha izindimbane zabantu abahaqwe yilolu khuvethe.
Mhlawumbe okumele sikucacise ukushayeka kakhulu kwezinkampani zaboHlanga okuyizona ezincike kakhulu ekuxhasweni uHulumeni. Lokhu kushayeka kwazo kubuye kwelekwe inzondo yalabo abangafuni sanhlobo kubekhona impumelelo ngemithetho efana nawoBBBEE. Kuso sona lesi sikhathi, sizwile ngoMfumfu kophezulu kuvela ukuthi lo mthetho osekela iBBBEE obizwa ngePPPFA nawo uye wahlaselwa maqede wabekwa eceleni okwesikhashana. Lokhu kusho ubunzima izinkampani zaboHlanga ezisazobhekana nabo ekuzithuthukiseni kusuka manje kuyaphambili.
Yize zikhona izimboni ezimbalwa ezibonakala zizuzile kakhulu ngalesi sikhathi esingabala phakathi kwazo, ezolimo, ezobuxhakaxhaka be-inthanethi, kepha ukuguquka kwesimo ngenxa yokhuvethe, baningi abangezukukwazi ukumelana nesimomqondo esisha nxa bengekwazi ukukhuphula izinga lokucabanga kwabo ngomhlaba omusha wezomnotho.
nguGugulethu Xaba Dec 11, 2020